Xilliga wakhtilummiska ilmahaActuellement sélectionné
​Canuggu wuxuu xaq u leeyahay ciyaar, nasasho iyo xilli firaaqo. Xilli firaaqo oo micno leh wuxuu ahaan karaa mid taageero u noqda horuumarka canugga. Carruurta badankoodu waxaa ay ka helaan in ay saaxiibbo la joogaan xilliga firaaqada. Waa caadi in la isticmaalo intarneet, la daawado TV, lana dhegeysto muusiko. Qaar badan waxay ku hawlanaadaan hawlo si fiican u abaabulan.
Carruurta Swiidhan joogta badankoodu waxay mar uun noloshooda ka mid noqdaan urur isboorti. Ku dhawaad tiro isla eg oo wiilal iyo gabdho ah ayaa firfircoon. Ururrada isboortigu waa caadi da’aha oo dhan laakiin inta ugu badan ee isboortiga sameysa waxaa ay ku jiraan da’aadda 10-12-jir. Isboortiga caadiga ah waa kubbadda cagta, farda fuulidda, kubadda dhulka, teenis, isboorti dabaal ah, ciyaarta xeegada barafka, jineestikada, kubadda gacanta, kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudfudud.
isboortiga swiidhishku waa dhaqdhaqaaq dimuquraadi ah. Wuxuu ku dhisanyahay urur xubin ka noqosho halkaas oo xubnuhu ay dhiibayaan lacag xubinnimo. Hoggaamiyayaal badan oo ku jira isboortiga swiidhishku waxaa ay waalid u yihiin carruur ururka ku jirta. Hoggaamiyayaasha badankoodu waxaa ay shaqeeyaan mushaar la’aan. Waaliddiinta waxaa badanaa laga fishaa in hawlaha la xiriira isboortiga canugga ay wax caawiyaan.
Waa caadi in canuggu da’ hore uu ku billaabo adeegsiga intarneetka.
Guddiga warbaahinta ee xukuumadda ayaa soo saaray dukumiinti kugu caawinaya in aad si wanaagsan u taageertid. Dukumiintiga oo loo turjumay luqado badan oo kala duwan waxaa laga akhrisan karaa barta intarneetka ee Guddiga warbaahinta ee xukuumadda.
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku aaddan sida aad ula xiriiri kartid hawlo kala duwan.